March 3, 2020 - Myitter
ဒီကနေ့ မတ်လ ၃ ရက် ည ၈ နာရီ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြိးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
March 3, 2020 Myitter 0
တရုတ်နိုင်ငံ ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်က ပြန်ရောက်လာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား (၂) ဦးအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါသံသယလက္ခဏာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ လူနာ (၃) ဦးရှိနေကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြိးဌာနက ဒီကနေ့ မတ်လ ၃ ရက် ည ၈ နာရီမှာ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ကစက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ (၂၅) နှစ်အရွယ် တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ […]
လူတွေရဲ့ မေတ္တာ စေတနာကို နင်းပြီး လိမ်နည်းနှင့် လတ်တလော ခေတ်စားနေတဲ့ လိမ်နည်း (၂)မျိုး
“လတ်တလော ခေတ်စားနေတဲ့ လိမ်နည်း (၂)မျိုး” တစ်နေ့က ဖြူးကို ကိစ္စလေးရှိလို့ အမြန်လမ်းကနေ အသွား ဘုန်းဘုန်း တစ်ပါး နေပူကြီးထဲ လမ်းဘေးမှာ ကားစောင့်နေတာ တွေ့လို့ ကားရပ်ပေးလိုက်တယ်.. (ကားက ကျွန်တော့်အသင်းက Ambulance ကားပါ..) “ဘုန်းဘုန်း…ကားစောင့်နေတာလား..” ဆိုတော့ ကားကို တစ်ချက် ကြည့်ပြီး […]
မြန်မာအမျိုးသမီး လက်ရွေးစင် ကစားသမားဟောင်း မစန်းစန်းမော်ရဲ့ အကြော်အသုပ်ဆိုင်ကလေး ….
မြန်မာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင် ကစားသမားဟောင်း မစန်းစန်းမော်ရဲ့ အကြော်အသုပ်ဆိုင်ကလေး မြန်မာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်း ကစားသမားဟောင်း မစန်းစန်းမော်သည် ဘဝအခက်အခဲတချို့ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းအနီး အကြော်၊ အသုပ်၊ အအေးစသည့် စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ဆိုင်ခင်းရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအဆင်မပြေမှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဆိုင်ဖွင့်ရောင်းချခြင်း သာဖြစ်ပြီး ကစားသမားများ မျက်နှာငယ်စေမည့် ဂုဏ်ငယ်စေမည့် ရည်ရွယ်ချက်မျိုး မပါကြောင်း ၎င်းက […]
ယနေ့ခေတ်မှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို လမ်းဘေးမှာ စွန့်ပစ်သူတွေရှိလာပါတယ်…အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မကျွေးမွေးမပြုစုနိုင်လို့ ခုလိုစွန့်ပစ်မှုတွေ ဖြစ်လာရတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ….. ဒါကြောင့် အဘိုးအဘွားတွေကို မစွန့်ပစ်ဘဲ စောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဦးဇင်းတစ်ပါးက ခုလို ပြောပြထားပါတယ်… “အဖိုးအဖွားများကို လမ်းဘေး မစွန့်ကြပါနဲ့ ဦးဇင်းဆီကို လာပို့လှည့်ပါ..ဦးဇင်းလာခေါ်ရမယ်ဆိုလည်းလာခေါ်ပါမယ်… ဦးဇင်း ကျောင်းခွဲတည်လိုက်ခြင်းက အဲဒီလို အဖိုးအဖွားများကို စောင့်ရှောက်ချင်လို့ တည်လိုက်ခြင်းပါ… […]
မန္တလေးမဟာမုနိ ဘုရားအောက်ခံ ပုလ္လင်စမ္မခံနေရာမှာ အက်ကြောင်းများဖြစ်ပေါ်နေ
မန္တလေးမြို့ရှိ မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး အောက်ခံပုလ္လင်စမ္မခံနေရာမှာ အက်ကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ မဟာမုနိဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ကသိရပါတယ်။ ဒီလိုအက်ကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလလယ်ခန့်စတင်တွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို့တွေ့ရှိပြီးနောက်မှာ သြဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးတွေထံတင်ပြသြဝါဒခံယူတာတွေ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ထံတင်ပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ မဟာမုနိဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးစိုးလင်းကပြောပါတယ်။ ” မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်အောက်ကခံထားတဲ့ ပုလ္လင်ကစမ္မခံဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့။ စမ္မခံဆိုတာက မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ ဘားမှမဆိုင်ဘူး။ အောက်ကနေခံထားတဲ့ ပုလ္လင်ခံလေးပေါ့။ ကိုယ်တော်နောက်ကျောတော်မှာ ရွှေတွေလည်များလာပြီ။ […]
မိသားစုအတှကျ ခွကေုနျလကျပနျးကတြဲ့အထိရခေဲခြောငျးရောငျးနခေဲ့လို့ ဆိုငျကယျပျေါမှာတငျ သဆေုံးသှားခဲ့တဲ့ ဖခငျ
မိသားစုအတှကျ ခွကေုနျလကျပနျးကတြဲ့အထိရခေဲခြောငျးရောငျးနခေဲ့လို့ ဆိုငျကယျပျေါမှာတငျ သဆေုံးသှားခဲ့တဲ့ ဖခင်ျထဖခငျဆိုတာက ငါ့ရဲ့မိသားစုဝငျတှေ အဆငျပွစှောနထေိုငျဖို့အတှကျ ခကျခဲစှာကွိုးစားရုနျးကနျပွီး အလုပျလုပျနခေဲ့ကွတဲ့အပွငျ ၊ သူတို့ခံစားနရေတဲ့ ဝဒေနာတှကေို ထုတျမပွပဲ မိသားစုဝငျတှအေတှကျ ရဲရငျ့ခွငျး နဲ့ အပွုံးပနျးတှကေို မကျြနှာပျေါမှာ အမွဲဆငျမွနျးထားသူလညျး ဖွဈပါတယျ ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ မှာနထေိုငျတဲ့ […]
ကြံ ရည်မှာ လူကိုအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများ စွာသာမက ဘက်တီးရီးယားပိုး မြောက်များစွာပါဝင်တာကို စင်္ကာပူ နိုင်ငံ MOH မှ investigation လုပ်ရာမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ စားသောက်ဆိုင် တွေဟာ ကမ္ဘာက စံထားရလောက်အောင် သန့်ရှင်းပါတယ် ဆိုင်တွေကိုလည်း ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် စီစစ်လေ့ရှိပြီး […]
အိမ်သာထဲတွင် ထိုင်ချိန် ၃ မိနစ်ထက် ပိုကြာပါက “အူကင်ဆာ” ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မား
ဆီးသွားသည်ဖြစ်စေ၊ အလေးသွားသည်ဖြစ်စေ အိမ်သာ အသုံးပြုချိန် ၂ မိနစ်ကနေ ၃ မိနစ်ခန့်ထိသာ ရှိသင့်ပြီး အချိန်ကြာကြာအသုံးပြုပါက “အူကင်ဆာ” ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာ သတိပေးပြောကြားလိုက်သည်။ အိမ်သာတက်ချိန်မှာ စအိုလမ်းကြောင်း ပွင့်နေတဲ့အတွက် အတွင်းအူများက ထွက်မကျလာအောင် သဘာဝအတိုင်း ၁၀ ကီလိုခန့် အလေးချိန်ရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်ဖိတာကို တောင့်ခံကြရပါတယ်။ […]
သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်းအနီး အကြော်ရောင်းနေရရှာတဲ့ မြန်မာ့အမျိုးသမီး ဘောလုံးလက်ရွေးစင် အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း စန်းစန်းမော်
မြန်မာ့အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းမှ အားကစားသမား စန်းစန်းမော် သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်းအနီး၌ အကြော် ရောင်းနေရကြောင်း မြန်မာ့လက်ရွေးစင်(ဟောင်း)ဦးကြည်လွင်က သူ၏လူမှုကွန်ယက်၌ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဦးကြည်လွင်က တစ်ချိန်က မြန်မာလက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းရဲ့ နောက်တန်းအုတ်တံတိုင်းကြီး စန်းစန်း မော်ဟာ သူရဲ့ အကြော်စုံဆိုင်လေးကို ခင်မင်သူအပေါင်း အားပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ မြန်မာ့အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင် စန်းစန်းမော်သည် လက်ရှိအချိန်၌ သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်း၌ အကြော်စုံရောင်းနေ […]
ထိုင်းက ကမ္ဘာ့မှာ တန်ဖိုးဈေးအကြီးဆုံး ထိုင်းဘတ်ငွေ၂၂သန်းတန်တိုက်ကြက်အသုဘ တဲ့ ….
ထိုင်းက ကမ္ဘာ့မှာ တန်ဖိုးဈေးအကြီးဆုံး ထိုင်းဘတ်ငွေ၂၂သန်းတန်တိုက်ကြက်အသုဘ တဲ့။ ကြက်အမည် ,,ကျောက်မနီဒေယ်ဘတ်၂၂သန်းကြေး ဖလားလုပွဲမှာ အနိုင်ရရှိလို့ဒီကြက်ရဲ့တန်ဖ်ိုးက အော်တို ဘတ်၂၂သန်းတန်ဖိုးရရှိသွားပါတယ်(ထိုင်းမှာ တိုက်ကြက်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်နည်းက နိုင်ကြေးအပေါ်မူတည်ပီး တန်ဖိုးသတ်မှတ်ယူက်တာပါ။ နောက် မနီဒယ်သည်ထိုင်းကြက်မျိုးစစ်စစ်မဟုတ်ပါမြန်မာတိုက်ကြက်နဲ့စပ်ဖောက်ထားတာပါ။ကြက်တစ်ကောင်ကိုခွပ်ရင် ၃ချီမကျော်ဘူး။ ထိုငးဘတ်ငွေ ၂၂သန်း နဲ့ဝယ်ရင် မြန်မာလူမျိုးတွေအမြင်မှာတော့ အရူးတွေပဲလို့ထက်မြင်နေကျမှာကျိန်းသေကျမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ မယုံမရှိကျနဲ့ဒီတိုက်ကြက်က သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဘတ်၂၂သန်းကို […]